Yaa ma jecla iPads ?! Iyagu waa weyn, ay yihiin oo quruxsan, oo ay kasoo muuqan technology ugu goynta laayeen laakiin inta badan oo dhan, dalab bang oo qiimihiisu muddaba macaamiisha ah ee! Users More iyo ka badan ayaa lagu soo jiidatay inay darbi in bandhig shaashad weyn iyo iPads ay kaliya ugu cadcadaa ka mid ah dadka isticmaala sida. Iyadoo horumarinta ee hawlaha iyo aad u badan iyo qaababka cusub oo xiiso leh, iPads ka badan si ay u bixiyaan. Taas oo ah sababta, BlackBerry badan oo xitaa qaar ka mid ah dadka isticmaala Android lagu baaraandegaya qalabka ay si aad u hesho gacmahooda ku iPad.
Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka isticmaala badan oo raadinaya hab ay u gudbiyaan xogta aad ka qalab BlackBerry in iPad ah, waxaad u baahan tahay in la fahmo sida badan oo gumaarka ah waxa ay noqon karaan. Waxaa jira siyaabo gaar ah si ay u gudbiyaan xogta la isticmaalayo software BlackBerry Desktop Laakiinse kuwanu waxay leedahay cillado iyaga u gaar ah. Bal aynu eegno qaar ka mid ah arrimaha ay caqabad ku wareejinta xogta ka BlackBerry in iPad.
Ma jiro wax si toos ah si ay u gudbiyaan dhammaan xogta aad ka BlackBerry in iPad.
Xataa software BlackBerry Desktop bixisaa keliya ee suuqa kala iibsiga Xogo kooban oo ka BlackBerry in iPad (fariimaha, xiriirada, jadwalka iyo cadaymaha oo keliya).
Geedi socodka Buuggan waa wax dheer oo u baahan in user aqoon farsamo oo qaar ka mid ah.
Si aad xog gurmad ka blackberry si aad u computer, waxaad u baahan doontaa software Blackberry Desktop lagu rakibay on your computer, cable USB ah iyo telefoonka aad Blackberry. Blackberry Desktop Software waa users BlackBerry gargaarka utility t rasmiga ah ee habka wareejinta xogta ama ka soo qalab BlackBerry. Si aad u billowdo, sii wado sida lagu faray hoos ku qoran:
1. Download BlackBerry Desktop software ka http://us.blackberry.com/software/desktop oo ku xidh si aad u computer. Marka geedi socodka rakibo dhamaato, abuurtaan Desktop BlackBerry ee Software.
2. Launch software BlackBerry Desktop. Tag "Device", oo ku yaalla geeska bidix ee kore ee shaashada, ka menu dropdown ka dooro "kaabta".
3. Laga bilaabo screen soo socda, ka fiiri "Full (dhammaan xogta qalab iyo goobo)". Tani waxay u ogolaaneysaa gurmad u leedahay in dhammaan xogta aad ka halkii blackberry waxyaabaha qaar ka mid ah loo doortay. Waxaa lagu weydiin doonaa in ay doortaan meel aad rabto in aad ku kaydiso gurmad this, dooro meesha aad joogto ah iyo ku dhufatey "kaabta" button.
Hadda, aad leedahay faylka raad raac ah oo aad BlackBerry laakiin waxaad weli u baahan si ay u dajiyaan xogta laga gurmad si aad iPad. Tani waa meesha MobileTrans Wondershare ku yimaado. Wondershare MobileTrans Waa utility ah in aad AIDS ee dhammaan noocyada kala duwan ee geedi socodka xogta kala iibsiga. Waxa ay taageertaa phone inay kala iibsiga telefoonka iyo sidoo kale phone inay kala iibsiga PC. Iyagoo keliya ma aha in, xataa kuu ogolaanayaa inaad la abuuro hayaan ama soo celiyo qalabka ka hayaan oo hore u jiray. Waxaa lagala soo bixi karaa http://www.wondershare.com/phone-transfer/ sida lacag la'aan ah 30 maalin tijaabo ah oo ah onetime liisanka isticmaalo waxaa laga iibsan karaa kaliya $19.95. Wondershare Mobile Trans taageeraa dhamaan qalabka in mid ka fikiri karaa; ka Symbian in Android inay Windows iyo macruufka, Wondershare MobileTrans waa xal ka mid click in aad dhibaato kala iibsiga xogta oo dhan ah.
1. Download Wondershare MobileTrans ka http://www.wondershare.com/phone-transfer/ oo ku xidh si aad laptop ama computer. Sug habka loo xirxiro si ay u buuxiyaan kaas oo caadi ahaan ayaan loo qaadan Karin in ka badan saddex ama afar daqiiqo.
2. Isticmaalka cable USB ah, ku soo lifaaq aad iPad in laptop la mid ah ama computer in aad kaliya ku rakiban Wondershare MobileTrans in.
3. Daahfurka Wondershare MobileTrans; ka menu guriga dooro "Soo Celinta", waxaa si toos ah lagu ogaan doonaa qalab aad iyo aad ka heli doonaa shaashadda la mid ah mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey.
4. Ka menu dhinaca bidixda, ay helaan faylka raad raac ah oo telefoonka aad Blackberry oo ay doortaan. Markaas dooran waxyaabaha xogta in aad rabto in aad soo celiso oo aad iPad isticmaalaya menu ee xarunta adigoo ama unchecking waxyaabaha la doonayo. Marka aad dhamaysid, bilaabaya geedi socodka dib u soo celinta adiga oo riixaya "Start Copy".
5. suuqa kala A furi doonaa ilaa la bar horumar ah oo aad u isticmaali karto si ay ula socdaan horumarka geeddi-socodka dib u soo celinta. Waqtiga dhamaystirka soo celiyo kala duwanaan karaan sida ay tirada xogta aad. Dhanka kale waxaad had iyo jeer u muuqdaan karaan si ay hawlo kale sida Wondershare MobileTrans uma baahna inay wax lug ah user kale ee geedi socodka.
Marka nidaamka dhamaato, waxaad heli doontaa dhammaan macluumaadka aad ka sahlan loo heli karo BlackBerry ee iPad iyo in sidoo kale aan ku guubaabinayaa dadaal ama waqti kasta. Yaabaa in aad dareentay ku fudayd iyo raaxada ay bixiyaan Wondershare MobileTrans si user ah inta ay socoto haddii kale ballaaran oo culaab wareejinta xogta.
Ka caawi in aannu ka go'aan qalab ugu caansan iPad ayaa haatan. Codeeyaan aad iPad iyo aragno oo iPad ku guuleystay tartanka!
3. iPad bandhigay isha
> Resource > iPad > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga BlackBerry in iPad